Soomaalida ku go’doonsan gudaha deegaanka Oromada oo qaylo dhaan soo dirsaday |
Soomaalida ku go’doonsan gudaha deegaanka Oromada oo qaylo dhaan soo dirsaday
Dad Soomaali ah oo ku go’doonsan deegaanka Balbalayti ee gobolka Oromada ayaa ka dayriyay xaaladdooda nololeed.
Dadkan ayaa xukumadda cusub ee deegaanka Soomaalida ka dhalatay iyo Umadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba ka codsaday iney u soo gurmadaan.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ku dhibaateysan oo BBC-da u warramay oo naga codsaday inaan magaciisa qarinno arrima amni darteed ayaa wuxuu noo sheegay Soomaalida meesha deggan oo gaareyso 10,000 oo qoys ay wax noolal ah ku haysanin deegaanka Balbaleeti ee ay hadda ku sugan yihiin.
Qomiyadda Oromada ee nagu hareereysan ayaa waxay naga hor istaageen ayuu yiri “inaan beera qodonno, xoola dhaqanno, ganacsanno ama wax dhaqdhaqaaq oo ka bixid ama soo gelid deegaankaas ah aan sameyno, waxayna naga qaadeen ayuu yiri wax kasta oo xorriyad ah oo bulsha meel ku nool ay lahayd.”
Wuxuuna intaa ku daray ninkaasi “Dhibaatada intaa la eg waxa looga geysanaya iney tahay Soomaalinimada oo keli ah, mar aan isku daynay inaan maatida kala baxno ayaa waxaan gaari ku kireysannay 35,000 oo Birr waxayna qowmiyadda Oromada noo istaagtay waddada dib ayeyna noo soo ceiyeen lacagti kirada gaariga aan ku bixinnayna sidaa ayey nagaga gubatay.”
Marka waxaan nahay dad geeri iyo noolol u dhaxeeya mar haddii inaan deegaanka balbaleeti si xor ah ugu noolaanno lanoo oggoleen inaan deegaanka soomaalida aadnana nalaga hor istaagay.
Deegaanka aan hadda ku sugannahay 10km dhinacna ugama bixi karno horayna waxay Oromadu nooga qaadatay wixi xoolo aan lahayn dad badanna wey naga leysay.
Qofki naga bukoodo ama haweeneydi ay fool qabatana adeeg caafimaad oo aan geysan karnaa jirin oo ay Oromada oggoleyn in xaruumahooda caafimaadka qof Soomaali ah lagu daweeyo.
Ciidamada Federaalka oo arkayo dhibaatada nalagu haya oo aan marar badan u cabanayna waxba nooma eysan qaban oo dhibka wey nagu fiirsanadeen ayuu yiri.”
Maalinti talaadada mar aan isku daynay magaala Ifsa la yirahdo oo degmada Hawi-gudina ka tirsan inaan ka soo dukaameysanno dadki soomaalida waxaa weeraray dhammaan shacabki magaalada dhibaata badan ayaana loo geystay afar qof dhaawac culus uu soo gaaray haba u sii darraadaana oo lugaha iyo gacmaha laga jajabiyey wixi ay wateenna laga dhacay.
Mar uu ka hadlayey xiriirka ay deegaanka Oromada ee ay ka cabanayaan iyo Kan Soomalaida xiriirka ay la sameeyeen wuxuu sheegay “Oromada waaba tan dhibka ku hayso iney waxba u qbaneyn balse Deegaanka Soomaalida ay wax xiriir ah la sameeynin meel ay kala xiriiranna ay garaneynin.”
Bulshada Soomaalida ee ku dhibaateysan deegaanka Balbalayti oo maamul ahan hoos tago Oromada waxaan codsaneynaa ayuu yuri:
Umadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsaneynaa iney noo soo duceeyaan sidi uu ilaahey inaga oo nabad qabno meeshan aan ku dhibaateysannahay nooga saari lahaa iyo wixi kale ee karaankooda oo ay noo qaban karaan.